Fanatsaram-batana : misy indray ny “Body Barre” sy ny “Cardiofit” | NewsMada
Fanatsaram-batana : misy indray ny “Body Barre” sy ny “Cardiofit”
Anisan’ny taranja be mpanao, amin’izao fotoana izao, ny Body fitness. Fanatanjahantena ampiarahina amin’ny mozika, tarihina mpanazatra na “coach”, atao anaty efitrano. Anisan’ireo klioba mitaiza sy manabe olona amin’izany ny Beauty Center Antanimena.
Ankoatra ireo efa mahazatra, niampy taranja telo vaovao indray ireo hikotranana ao aminy dia ny “Body Barre” sy ny fanamafisana ny nofo sy ny hozatra “renforcement musculaire” ary ny fahasalaman’ny fo na ny “Cardiofit”.
Nampahafantarina ny mpanao gazety, ny asabotsy lasa teo, ireo taranja vaovao ireo, ka nisy ny fampiharana izany tamin’ireo olona tsotra. Mampiasa fitaovana toy ny “poids” sy ny “barre”, mba hanamboarana ny nofo tsy hiroraka, ary hananana tanjaka ny “Body Barre”. Mitaiza ny fo sy mampikoriana ny rà, amin’ny ara-dalàna kosa ny “Cardiofit”. Tsy mifidy taona na sokajin’olona fa afaka manao azy avokoa ny olon-drehetra.
Mampisokatra ny saina ho an’ny ankizy mpianatra, sy mampavitrika ny olona efa lehibe ary mitondra fahasalamana ho an’izay rehetra manao azy, ireo taranja telo vaovao ireo, raha ny nambaran’i Sisi sy Sôlô, mpanazatra. Adiny iray ihany ny faharetan’ny kotrana.